American Golden Retriever: ဒီဟာကမင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Goldie လား။ - Breeds
Golden Retrievers များသည်များသောအားဖြင့်အထူးနိဒါန်းများမလိုအပ်ပါ။ သူတို့ဟာ US မှာသာမကကမ္ဘာမှာပါလူကြိုက်အများဆုံးခွေးမျိုးရိုးထဲကတစ်ခုပါ။
အမေရိကန်ရွှေ retriever နှင့်တွေ့ဆုံပါ
သို့သော် Goldies သုံးမျိုးရှိကြောင်းသင်သိပါသလော။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုဖော်ပြပေမယ့်အမေရိကန်ရွှေ Retriever ထူးခြားစေသည်အရာကိုအာရုံစိုက်ကြကုန်အံ့။
အမေရိကန် Golden Retriever ဆိုတာဘာလဲ။
American Golden Retriever ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။
အမေရိကန်ရွှေ retriever ကိုဂရုစိုက်ခြင်း
အမေရိကန်နှင့်အင်္ဂလိပ် Golden Retriever နှင့်ဆင်တူသားဖောက်
အမေရိကန်ရွှေ retriever ဒီမျိုးကွဲများ၏မူကွဲတစ်ခုဖြစ်သည်ပေမယ့် သူတို့မဆိုသန့်စင် Goldie အတူတူပါပဲ ။
ဒီခွေးရဲ့မူလအစအကြောင်းအနည်းငယ်ဆွေးနွေးကြပါစို့။ သငျသညျ၏သမိုင်းခြေရာကောက်နိုင်ပါတယ် ရွှေ retrievers ၁၉ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်စကော့တလန်ကိုသူတို့အမဲလိုက်ရန်နှင့်ရေငှက်များရှာဖွေရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဤကျွမ်းကျင်သောအမဲလိုက်ခြင်းမျိုးသည်နောက်ဆုံးတွင်မြောက်အမေရိကနှင့်အခြားတိုက်ကြီးများသို့ကျော်တက်သွားပြီးလူကြိုက်များလာသည်။ ယနေ့တွင်သူတို့သည် US တွင်တတိယအကျော်ကြားဆုံးမျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီး UK တွင်အဆင့် ၈ ရှိသည်။
လူတို့သည် Goldens ကိုသူတို့၏ဉာဏ်ရည်နှင့်ချိုမြိန်မှုအတွက်နှစ်သက်ကြသည် ရှာဖွေရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်မသန်စွမ်းသူများအတွက်အကူအညီပေးသည့်ခွေးများကဲ့သို့သောအခြားကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းများတွင်သူတို့ကိုထူးချွန်စေသည်။
အမျိုးအစားများ - English Golden Retriever VS. အမေရိကန်ရွှေပြန်လည်ရယူသူ
အဖြူရောင်ရွှေ Retriever နှင့်တွေ့ဆုံပါ
Goldens ကိုပထမ ဦး ဆုံးအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည် ဗြိတိသျှခွေးဂေဟာကလပ် (KC) 1913 ခုနှစ်နှင့် အမေရိကန်ဂေဟစနစ်ကလပ် (AKC) ၁၉၃၂ ခုနှစ်။ ကလပ်တစ်ခု၏မျိုးပွားမှုစံနှုန်းများသည်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာဒေသများနှင့်တိုင်းပြည်များတွင်ခွေးပိုင်ရှင်များ၏ ဦး စားပေးမှုနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
အမေရိကန်ရွှေဒင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အများဆုံးရွှေပြန်ယူသည့်မူကွဲမှာဥရောပရှိ Goldies များဖြစ်သည် အင်္ဂလိပ် Cream ရွှေ Retrievers ။
နှုန်းအတိုင်း ယူနိုက်တက်ခွေးဂေဟာကလပ် (ယူကေ) သည်စံသတ်မှတ်ချက်ကိုလိုက်နာသည် English Goldens အတွက်ဆိုရင်သူတို့မှာဆံပင်တိုပြီးပိုတိုတယ် မုန့်အရိပ်၌လာကြ၏ အချို့သောသူတို့၌ရွှေဖြူနှင့်ဖုံးထားသောအဖြူရောင်အင်္ကျီရှိသည်ဟုထင်ရသည်။
၎င်းတို့တွင်အတန်အသင့်အရွယ်အစားရှိသောသေတ္တာနှင့်တူသော ဦး ခေါင်းနှင့်နားများပိုမိုကျယ်ပြန့်သည်။
အပြုအမူနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အင်္ဂလိပ်အမျိုးအစားကိုလူသိများသည် နူးညံ့သောနှင့်လေ့ကျင့်ရန်လမ်းပိုမိုလွယ်ကူ ။
ကျန်းမာရေးအတွက် Golden Retrievers နှစ်မျိုးလုံးသည်တူညီသောရောဂါများခံစားကြရသော်လည်းအင်္ဂလိပ် Goldens သည်သူတို့၏သက်တမ်းအများစုကို ၁၂ နှစ်ဖြစ်သောပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်နေရာ၌ရှိနေသည်ဖြစ်စေ kennel club များက၎င်းတို့အား“ Golden Retrievers” ဟုရည်ညွှန်းကြောင်းရှင်းလင်းလိုသည်။
American Goldens တွင်ကျယ်ပြန့်။ ခုံးခေါင်းခွံအနည်းငယ်ရှိပြီးပိုမိုနက်ရှိုင်းသောမျက်နှာရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်နားရွက်တိုများနှင့်အနီးကပ်တပ်ဆင်ထားသောအနားကွပ်များရှိသည်။ သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြားအဆုံးမှာတော့အနည်းငယ်ကွေးသောအမြီးပါရှိသည်။
The AKC စံဖောက် သူတို့၏အင်္ကျီအရောင်ကို“ အရိပ်အမျိုးမျိုးရှိသောကြွယ်ဝသောတောက်ပသောရွှေ” အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အလွန်အမင်းအလင်းသို့မဟုတ်အလွန်မှောင်မိုက်သောသားမွေးများရှိသည့် Goldie ကိုအမှားတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်သို့မဟုတ်အသိအမှတ်မပြုပါ ။
အမျိုးအစားအားလုံးရှိသည် နူးညံ့သော undercoat နှင့်ရေခံနိုင်သည့်သိပ်သည်းသော topcoat ။ အခြားအမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းတို့သည်ပိုမိုပါးလွှာသောအမွေးများနှင့်ပိုထူသောအင်္ကျီများရှိသည်။
သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏အချို့သောနေရာများဖြစ်သောလည်ပင်း၊ ပေါင်နှင့်အမြီးကဲ့သို့သော t ပိုလေးသောအမွေးရှိသော်လည်းအလွန်အကျွံရှည်မ ။ သငျသညျခွေးရှိုးပွဲများတွင်ပူးပေါင်းရန်စီစဉ်နေလျှင်, သဘာဝကြည့်အမြဲသွားကြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် Golden Retriever သည်မည်သည့်နေရာမှမဆိုရပ်တည်သည် 21.5 မှ 24 လက်မ (၅၅ မှ ၆၁ စင်တီမီတာ) အမြင့်ရှိပြီးအလေးချိန်ရှိသည် 55 နှင့် 75 ပေါင် (25 မှ 34 ကီလိုဂရမ်) ။ အမျိုးသမီးများသည်အမြဲတမ်းယောက်ျားများထက်အနည်းငယ်သေးငယ်သည်။
သူတို့ဟာစမတ်ကျပြီးလေ့ကျင့်နိုင်ပေမဲ့ Golden Retrievers တွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ရပ်နားထားပါတယ်။
တိုက်ခန်းကောင်းကောင်းတွေသာနေထိုင်နိုင်ရင်တောင် လုံခြုံစိတ်ချရသော၊ ကျယ်ဝန်းသည့်အိမ်နောက်ဖေးရှိအိမ်တစ်လုံးသို့၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် သူတို့ကစားချင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကစားလို့ရတယ်။
အားလုံးရွှေ Retrievers ဖြစ်ကြသည် ဖော်ရွေပျူငှာသော၊ ။ အမေရိကန်မူကွဲကိုထင်ရှားစေမည့်လက္ခဏာတစ်ခုမှာသူတို့၏စွမ်းအင်အဆင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအလွန်အမင်းတက်ကြွစွာနှင့်အားကစားနေသောပျော်စရာပဲကြီးမားတဲ့ဘောလုံးပါပဲ။
ထိုအရာအားလုံးကိုသူတို့၏အမဲလိုက်ခြင်းဗီဇနှင့်ပေါင်းပါ ဘယ်တော့မှပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသောခွေးတစ်ကောင် ။
သူတို့သည်မိသားစု၏နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောကြောင့်ယင်းဖော်ရွေသောခွေးရူးပြန်ခြင်းကိုအချိန်ကာလများစွာကြာအောင်ထားခဲ့ခြင်းသည်မကောင်းပေ ခွဲခြာစိုးရိမ်စိတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လေ့ရှိပါတယ် ။
American Goldie ရှိတာဘာကိုကြည့်ချင်ပါသလဲ။ ဤရယ်စရာဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။
ဒီဖောက်ဖြစ်ပါတယ် ယေဘုယျအားဖြင့်တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်ရံဖန်ရံခါဟောင်ပါလိမ့်မယ် ။ သင်၏ Golden Retriever အလွန်အမင်းဟောင်ခြင်း၊ ငိုခြင်းသို့မဟုတ်ပရိဘောဂဝါးစားခြင်းများကိုသင်သတိပြုမိပါက၎င်းသည်ခွဲထုတ်ခြင်းစိုးရိမ်မှုလက္ခဏာများဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီ fido ဟာသူတို့ခွေးတွေနဲ့အတူနေတဲ့အိမ်မှာနေတယ်၊ ​​ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုသူတို့ကုမ္ပဏီကိုထားဖို့တခြားအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနေထိုင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ အတူကစားရန် furry PAL ရှိခြင်းလည်းသင်၏ Goldie ရဲ့ pent တက်စွမ်းအင်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
Golden Retrievers များသည်၎င်းတို့အားရံဖန်ရံခါသန့်စင်ရန်သာလိုအပ်သောကြောင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့်ကျသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆနိုင်သည်။
American Golden Retriever ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သွန်းလောင်းခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုပါသလား။
မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ Golden Retriever မထားပါနှင့်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်တစ်ကယ့်ကိုဆိုးဆံပင်အခွအေနေရဲ့နောက်ဆုံးအပန်းဖြေစခန်းမဟုတ်လျှင်မည်သည့်ကို double-coated ဖောက်ရိတ်မရသင့်ပါတယ်။
ဒါက ထူသောအင်္ကျီက ၄ င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးပြီးသူတို့၏အရေပြားကိုရာသီဥတုအမျိုးမျိုးမှကာကွယ်ပေးသည် ။
ဆံပင် follicles ကိုပျက်စီးစေခြင်းကလည်းသူတို့ရဲ့အင်္ကျီကိုဘယ်တော့မှကောင်းကောင်းမပေါက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ။
Golden Retriever ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သူတို့လိုအပ်သောအချိန်နှင့်ဂရုစိုက်မှုကိုသင်သတိပြုမိသည် ။ သင့်ခွေး၏အင်္ကျီအားဖြင့်စောင့်ရှောက်ပါ နေ့စဉ်အဲဒါကိုနို့တိုက် , နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြီးလိမ်းပုံအဘို့, နှစ်လတစ်ကြိမ်သူမ၏သတို့သားထံသို့ဆောင်ခဲ့ရမည်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဲ့သို့သော Golden Retrievers အတွက်အကောင်းဆုံးတံဆိပ်များဖြင့်သင့်ကိုယ်သင်တပ်ဆင်ပါ bristle brush ရန် ထီးတပါးဖြီး နှင့် ထွန်ခြစ်ဖယ်ရှားပစ် ။
American Golden Retrievers တွေကတော့ပျင်းစရာကောင်းတယ် တစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်နာရီမျှလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ ။
“ ငြီးငွေ့နေသောခွေးသည်ပျော်ရွှင်သောခွေးတစ်ကောင်” ဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည် သင်သည်သင်၏ခွေးကလေးကိုအလွန်အကျွံမသုံးသင့်ပါ အပြည့်အဝမဖွံ့ဖြိုးသေးသောသူတို့၏အရိုးများနှင့်အဆစ်များကိုဖိအားပေးခြင်းမှရှောင်ရှားရန်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်လမ်းလျှောက်ခြင်းပြtoနာများဖြစ်ပေါ်စေပြီးနောက်ပိုင်းတွင်တင်ပါးဆုံရပ်ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ကစားချိန်များနှင့်လေ့ကျင့်မှုများအပြင်သင့်ခွေးအားစိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေမည့်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပါသည် ပဟေ.ိ ဒါမှမဟုတ် ကစားစရာ - သူမကိုစဉ်းစားစေမည့်အရာ။
American Goldie အတွက်အကြံပြုတဲ့အစားအစာ
အမေရိကန်ရွှေပြန်လည်ရယူသူများ မယုံနိုင်လောက်အောင်အလေးချိန် - အထိခိုက်မခံ ဒါ့အပြင်နို့တိုက်ကျွေးတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုရှောင်ရှားရန်၊ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုပေးသောအစားအစာအမျိုးအစားနှင့်ခွေးအစားအစာပမာဏသည်သူမ၏လှုပ်ရှားမှုအဆင့်၊ အသက်နှင့်အရွယ်အစားအပေါ်မူတည်ကြောင်းသေချာပါစေ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသော Goldies တို့သည်စားရန်လိုအပ်သည် တစ်နေ့လျှင် ၂ ခွက်မှ ၃.၅ ခွက်ခန့် ။ အရိုးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်မသင့်တော်သောကြောင့် Goldens သည်အလွန်လျင်မြန်စွာကြီးထွားစေနိုင်သောကြောင့် high-calorie ချက်ပြုတ်နည်းများကိုရှောင်ပါ။
သင်၏ Golden Retriever အတွက်အကောင်းဆုံးခွေးစာအမှတ်တံဆိပ်ကိုသင်ရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်ခုရှိသည် ဆောင်းပါး အဲဒါကမင်းကိုကူညီနိုင်တယ်
American Goldies သည်အနည်းငယ်တိုတောင်းသောသက်တမ်းရှိသည် အင်္ဂလိပ် Cream ရွှေ Retrievers ထက်။ အမေရိကန်ရွှေ၏ပျမ်းမျှသက်တမ်းမှာ ၁၀ နှစ်နှင့် ၈ လဖြစ်ပြီးဗြိတိသျှနိုင်ငံ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှာ ၁၂ နှစ်နှင့် ၃ လအထိနေထိုင်သည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်အမေရိကရှိ Golden Retriever Club မှလေ့လာခဲ့သောလေ့လာမှုတစ်ခုမှာအမေရိကန်ရွှေပြန်လည်ရယူသူများ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အင်္ဂလိပ်ရွှေပြန်လည်ရယူသူများ၏ ၃၉% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကင်ဆာရောဂါဖြင့်သေဆုံးသည်ကိုသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကင်ဆာရောဂါအပြင်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုပါ ၀ င်သည့်အမေရိကန် Goldens သည်တင်ပါးဆုံရိုးနှင့်တံတောင်ဆစ် dysplasia၊ gastric Dilation-Volvulus စသည့်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများနှင့်မျက်စိနှင့်သိုင်းရွိုက်ပြshareနာများကိုမျှဝေပေးသည်။
အမေရိကန် Golden Retriever ခွေးကလေး ဘယ်နေရာမှာမဆို $ 500 ကနေ $ 2500 ကုန်ကျနိုင်ပါတယ် , မျိုးဆက်ရဲ့တည်နေရာ, အ kennel ရဲ့လူကြိုက်များနှင့်မိဘ၏သွေးကြောပေါ်မူတည်။ ။
ကောင်းမွန်သောမျိုးပွားသူတစ် ဦး သည်သင်၏ကျန်းမာရေးလက်မှတ်နှင့်သင်၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသူငယ်ကိုသိရန်အထောက်အကူပြုမည့်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းကိုမဆိုမတွန့်ဆုတ်ပါ။
သူတို့ကအစဘယ်သူ့ကိုမှရောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ခွေးများကိုဂရုစိုက်တတ်သောတာ ၀ န်ရှိသောမျိုးဆက်များသည် ၀ ယ်သူတစ် ဦး သည်၎င်းတို့၏ခွေးနှင့်လိုက်ဖက်သောကိုက်ညီမှုရှိစေရန်သေချာစေသည်။
အမေရိကန် Golden Retriever မျိုးဆက်များ
အထူးသဖြင့် Golden Retriever သည်တရားဝင်အသင်းအဖွဲ့များတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကြောင့်ကောင်းမွန်သောအရာဖြစ်သည်။
ရွှေ Meadows Retrievers (Moorpark, CA)
Tsillan Goldens (ရေကန် Chelan, WA)
မြောက်အမေရိကစတား Golden Retrievers (Logan, UT)
SunGolden ခွေးဂေဟာ (Longview, CT)
အမေရိကန်ရွှေ Retriever ကယ်ဆယ်
မွေးစားခြင်းသည်သင်လိုချင်သောမည်သည့်ခွေးအမျိုးအစားသို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုမဆိုရရှိရန်အတွက်စျေးသက်သက်သာသာဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်ရုံတင်မကဘဲ pooch ကိုချစ်ခြင်းနှင့်အိမ်တွင်အခြားအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
လိုအပ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ရွှေ Retrievers (Cleveland, OH)
ဖလော်ရီဒါအလယ်ပိုင်းမှရွှေပြန်လည်ရယူသည့်ကယ်ဆယ်ရေး (Goldenrod, FL)
နယ်နိမိတ်မရှိရင်ရွှေ (Las Vegas, NV)
ရန်ကီးရွှေပြန်လည်ရယူသည့်ကယ်ဆယ်ရေး, Inc (Hudson, MA)
Wisconsin ပြည်နယ်၏ရွှေ Retriever ကယ်ဆယ်ရေး (West Allis, WI)
အဘယ်အရာကိုအခြား Retriever ဖောက်ထွက်ထွက်ရှိပါတယ်တွေးမိ? Goldies နဲ့တူတဲ့ခွေးလား?
ဤခွေးတစ်ကောင်သည်အမေရိကန်ရွှေပြန်လည်ရယူသူများနှင့်အခြားရွှေဒင်အမျိုးအစားများနှင့်တူညီသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသည့်အရာတစ်ခုလည်းရှိသည်။
Chesapeake ဂလားပင်လယ်အော် Retriever
Nova Scotia ဘဲခွန်ကောက်ကောက်ပြန်လည်ရယူသူများ
အမေရိကန် Goldens များအတွက်ပါစေ အလွန်ကောင်းတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ လက်ျာမိသားစုနှင့်အတူတပ်ဆင်လျှင်။
သူတို့နှင့်အတူတက်နိုင်သူပိုင်ရှင်လိုအပ်ပါတယ် လုံ့လရှိသူနှင့်အပျော်အပျက်သဘောသဘာဝ , နှင့်တစ် ဦး တည်းကြာမြင့်စွာကာလအဘို့ထိုသူတို့စွန့်ခွာမည်မဟုတ်သူတစ် ဦး ။
မင်းမှာကလေးသေးသေးလေးရှိရင်၊ Golden Retrievers သည်နိုးနိုးကြားကြားရှိသည့်သက်ကြီးရွယ်အိုမောင်နှမများကဲ့သို့ပြုမူလိမ့်မည် ဒါဆိုမင်းကတစ်ခုခုပြောသင့်တယ်။
သင်တို့သည်လည်းဤအကိုင်တွယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည် နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားသူ ။ ဒီ pooch ပိုင်ဆိုင်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်ဒီအရွယ်အစားနှင့်အတူမည်သည့် pooch ဂရုစိုက်ဖို့လွယ်ကူသောမဖြစ်နိုင်ပါ။
Pug အမည် ၇၀ - Pug အတွက် Pug-Squisite၊ Pug-Tastic နှင့် Pug-Tiful အမည်များ
ကြီးထွားလာသောအရုပ် poodle သေးသေးလေး
အပြာရောင်နှာခေါင်း pitbull boxer ရောနှော
mini သြစတေးလျသိုးထိန်း husky ရောနှော